I-Recipe ephepheni ekhusiweyo
I-Pepper enezixhobo ezifakwe kwenyama Enye yezona zikhethi ezivelele kakhulu zasehlobo zi, ngaphandle kokungathandabuzeki, i-pepper e-sweet entake inyama kunye nelayisi. Olu khetho lweklasi, apho nganye intsapho inemibala yayo. Omnye uthanda nje inyama yezilwanyana, umntu endaweni yerayisi yongeza i-buckwheat, kwaye ezinye zidibanisa ukulungelelanisa inyama ebisiweyo kunye nefry. Ngelixa ihlobo lingazange liphele kwaye sinethuba lokupheka kwi-real, emhlabathini, kungekhona i-pepper greenhouse, unokuzama ukuzalisa, nokuzalisa, kunye nendlela yokulungiselela. Emva koko, akuyimfuneko ukulungiselela ipilisi entle ephosiweyo kwisitofu. Ungayifaka ebhodini elikhulu le-ceramic kwaye uyifake kwi-oven phantsi kwesiqhekeza. Ngokuqhelekileyo zizaliswe "iikomityi" zifakwa epeni ngokuzenzekelayo. Kule meko, kunokwenzeka ukufaka iziqwenga zeetatayi ezihlutshiwe kunye nentloko ye-anyanisi phakathi kweemida eziphantsi. Ngoko ufumana esinye isidlo esikhethekileyo, kwaye uyakwazi ukubona ngokucacileyo ukuba ipipper isilungile: ukuba iifatata zikulungele, ke lixesha lokususa ipeni emlilweni. Ingcamango yesi sidlo esimnandi siphantse ngokuzimeleyo kombala wepilisi, kodwa kwisitya esibekwe phakathi kwetafile yeholide, i-kaleidoscope yembobo eluhlaza, eluhlaza, eluhlaza kunye nobomvu ebomvu ikhangeleka kakhulu.
Pepper amnandi ama-8.
Ingulube i-500 g
Ingqolowa ende eninzi i-0.5 tbsp.
ICarrot 2 ipcs.
Ijusi yetamatato 1 l
Ukhilimu omuncu 3 tbsp. l.
I-Pepper emnyama mnyama 3
Ioli ejongene ne-sunflower ecocekileyo i-tbsp 2. l.
Inyathelo 1 Ukulungiselela ipilisi, kungcono ukuthatha umlinganiselo kunye nobukhulu obufanayo. Uyakufuna kwakhona inyama egumbisiweyo, i-anyanisi, i-karoti, irayisi, ijusi ekulungeleyo kunye neziqholo.
Inyathelo 2 I-anyanisi kunye neenqholi zihlanjululwa, zityuntshe i-anyanisi ngokukhawuleza, kwaye udibanise iinqwelo kwi-grater.
Inyathelo 3 Phinda uphelele iipunipoji ezi-2-3 kwipani yokucoca. l. Ioli ehlaza kunye ne-fry i-anyanisi kunye neetikiti kuze kube mnandi wegolide.
Isinyathelo 4 0.5 iglasi yelayisi ihluthise kakuhle, uthele iglasi yamanzi abandayo, ulethe emathunjini uze upheke uze ulungise imizuzu engama-15-20, ungeze ityuwa.
Inyathelo 5 I-sweet pepper ukuze uhlambe kwaye ususe imbewu, uyinyamekele ukuba ungonakalisi emacaleni ompompo.
Inyathelo 6 Kwi-mince yongeza i-roast ephekiweyo, irayisi ebilisiwe, i-pinch yetyuwa kunye nompompo omnyama. Umlinganiselo welayisi kunye nenkomo yomhlaba kufuneka ibe malunga ne-1: 3.
Inyathelo 7 Hlanganisa ngokupheleleyo.
Isinyathelo 8 Kwiipilisi eziphekiweyo ziqine ngokugxininisa.
Isinyathelo 9 Beka i-pepper kwisibhakabhaka esikhulu uze udibanise i-tomato juice kunye nekhilimu enomuncu (ngaphambi kokuxuba ukhilimu omuncu kwincinci yejusi, ukuze ihanjiswe ngokufanayo).
Inyathelo le-10 Yizani yonke into ekubiliseni kwaye upheke imizuzu engama-35-45 ukusuka kumbindi wokubilisa phezu komlilo ophantsi komsila. Ngethuba lokulungiselela, yongeza ityuwa kunye nepelepele ukula.
Isidlo kunye nama-meatball kwi-multivark
Ikhekhe le-carrot ngamantongomane
Udon ne-shrimps kunye nemifuno
Umhluzi weeshizi "I-After-Holiday"
Ukudla inyama yokutya yehashe
Umqhubi wesibhakabhaka kwi-pie yesibindi
Amagcisa amakhulu: Ubomi obudumileyo
Ukunciphisa umzimba ngaphandle kokulimaza iinwele: ukutya kweenwele
Ii-Muffins nge jam kunye nebhotela
Iindawo zokuhlala ze-Abkhazia
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo zeJade
Ubawo kufuneka bathethe njani nomntwana
Bagel enezimbewu zepoppy
I-scalp eyomileyo kumntwana
Ukufunda ukufumana indlela efanelekileyo
IHoroscope yeTaurus-Abafazi ngo-Matshi 2017
Uxhoba lwefashoni noAndré Tan
Ama-eggplant abhakawa ngeetamatato kunye noshizi
Aries: i-horoscope ekwindla ka-2013
Iimayonnaise ezenziweyo kunye nesardadi yaseFransi
Indlela yamaGrike: ngaphakathi